China uphondo okwenyanga imbobo Abakhiqizi futhi Suppliers | Hong Sheng
PP imbobo PPS ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi tube
Futha egeza umbhoshongo nezinsiza
Ocushiwe carbon adsorption umbhoshongo
PP iphakethe slot
PP Plating sigubhu
PP ishidi PPS ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ibhodi
PPS ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi spray umbhoshongo
Ovundlile spray umbhoshongo
PPS ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi spray umbhoshongo ukukhiqizwa isayithi
Uphondo imbobo eliyindilinga
PVC carbon isebenze adsorption umbhoshongo
izakhiwo Mechanical I PP imbobo has crystallinity eliphezulu futhi isakhiwo njalo, futhi ngenxa yalokho elinomthwalo kakhulu izakhiwo lokukhanda. Nokho, at Igumbi lokushisa bese lokushisa ongaphakeme, amandla umthelela ayiyinhle ngenxa ngezinga eliphezulu yamangqamuzana isakhiwo njalo. Ukusebenza oluvelele ngaphezulu PP ipayipi yilona ukumelana eguqa ukukhathala, ngokuvamile eyaziwa ngokuthi kokokunamathisela engamakhulu-emhlanjini. ukusebenza Thermal I PP emoyeni imbobo has ezinhle ukushisa ukumelana, umkhiqizo kungenziwa inzalo futhi ster ...
I PP imbobo has crystallinity eliphezulu futhi isakhiwo njalo, futhi ngenxa yalokho elinomthwalo kakhulu izakhiwo lokukhanda. Nokho, at Igumbi lokushisa bese lokushisa ongaphakeme, amandla umthelela ayiyinhle ngenxa ngezinga eliphezulu yamangqamuzana isakhiwo njalo. Ukusebenza oluvelele ngaphezulu PP ipayipi yilona ukumelana eguqa ukukhathala, ngokuvamile eyaziwa ngokuthi kokokunamathisela engamakhulu-emhlanjini.
I PP emoyeni imbobo has ezinhle ukushisa ukumelana, umkhiqizo kungenziwa inzalo futhi inzalo ezingeni lokushisa 100 ° C noma ngaphezulu, futhi hhayi zikhubazekile-150 ° C ngaphansi isimo hhayi bophezela zangaphandle. Amazinga embrittlement kuyinto -35 ° C, embrittlement kwenzeka ngezansi -35 ° C, kanti ukumelana ezibandayo akuyona kwafana polyethylene.
Ukuthula amakhemikhali imbobo PP muhle kakhulu. Ngaphandle uhlaselwa kanzulu sulfuric acid futhi wagxila nitric acid, kuba saka ahlukahlukene nezinye reagents zamakhemikhali. Nokho, ongaphakeme isisindo yamangqamuzana hydrocarbon aliphatic, hydrocarbon elimnandi hydrocarbon kampompi ukuxova umuthi wokugoma kungathambisa ipayipi PP. Nokuvuvukala, futhi yawo yamakhemikhali ukuzinza nokwanda crystallinity kuyathuthuka futhi, ngakho PP ipayipi siyafanelana ukukhiqizwa amapayipi yamakhemikhali ahlukahlukene kanye nokufakwa kwayo, umphumela anti-ukugqwala muhle.
I PP imbobo ine omuhle kakhulu ephezulu imvamisa ukwahlukanisa ukusebenza, futhi kusukela ngo-ke neze ubamba amanzi, ukusebenza ukwahlukanisa ayitsintseki nomswakama. It has a njalo okusezingeni eliphezulu Kwe-dielectric Heating futhi ingasetshenziswa ukwenza evuthayo imikhiqizo ukwahlukanisa kagesi njengoba izinga lokushisa likhuphuka. It Ubuye okusezingeni eliphezulu ukuwohloka voltage kufanelekile ukusetshenziswa njengoba nesisekeli kagesi. It enokumelana okuhle voltage ukumelana arc, kodwa okusezingeni eliphezulu zikagesi futhi kulula yobudala ngethusi.
Isimo sezulu ukumelana
I PP imbobo ozwelayo ultraviolet, kanye kwalokho zinc oxide, dilauryl thiodipropionate, carbon omnyama noma efanayo yamathebhu ezimhlophe angathuthukisa ukumelana layo ukuguga.
Previous: PP ibha
Okulandelayo: PP imbobo
PPS Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi Tube Inkampani
PPS Material Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi Tube
PPS ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi imbobo
Welding Fume purifier , China Plastic Vertical Pum Factory, Self-Priming Pump , umswakama umswakama ,